साउदी अरबमा फिलिपिनोसँग म’स्ती गरेर जन्मियो बच्चा ! नेपालमा दुई सन्तान सहित श्रीमतीको रुवावासी (हेर्नुस् भिडियो) – " सुलभ खबर "
साउदी अरबमा फिलिपिनोसँग म’स्ती गरेर जन्मियो बच्चा ! नेपालमा दुई सन्तान सहित श्रीमतीको रुवावासी (हेर्नुस् भिडियो)
जंगवहादुर थिगं साउदीमा ड्राइभरको जागिर खाने गरेका थिए । उनले नेपालमा आफ्नो श्रीमती र दुई छोराछोरीलाई छोडेर गएका थिए । तर पछिल्लो केही वर्ष देखि उनी परिवारको सम्पर्कमा थिएनन् । श्रीमतीले ऋण खोजेर साउदी पठाएको श्रीमान ७ वर्षसम्म सम्पर्क विहिन भएपछि उनको श्रीमती सिला लामा मिडियामा आएकी छिन् । ति महिलाले आफ्ना श्रीमान जंगवहादुर साउदीमै फिलिपिनो महिलासँग विवाह गरेको र उनीबाट एउटा सन्तान पनि भएको लामाले बताएकी छिन् ।
श्रीमतीले इमोमा ब्लक गरेका कारण फेसवुकमा आफुले पनि ब्लक गरेको स्पष्टिकरण दिएका छन् । उनले अहिले आफुले फिलिपिनो केटीसँग विवाह गरेको पनि स्वीकार गरेका छन् । अब घरको ऋण तिर्ने र छोराछोरीको पढाई खर्च बेहोर्ने बताएका छन् । जंगवहादुरले बिचबिचमा खर्च पठाइरहेका कारण सबै ऋण तिर्न भने नसक्ने बताउँछन् । तर श्रीमतीले भने जंगवहादुरले पैसा नपठाएका कारण ऋण लिन परेको बताएकी छन् । सात वर्षको अवधिमा श्रीमानले २ लाख रुपैया मात्र पठाएको उनले बताएकी छिन् । श्रीमतीले भने ७ वर्षको अवधिमा दुई छोराछोरी पाल्न, पढाउन कति खर्च लाग्छ आफै हिसाव गरेर खर्च पठाउनुपर्ने श्रीमतीको भनाई छ ।
श्रीमती मिडियामा आएपछि भने उनका श्रीमान जंगवहादुर पनि फोनमा सम्पर्कमा आएका थिए । उनले आफुले त्यसपछि भने अब पैसा पठाउँछु छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमा पढा भनेर फोन गरेका थिए । श्रीमानले ७ वर्षसम्म सम्पर्क विहिन भएर बसेपछि उनले अब माया गर्न र खुसी दिन सक्दिन भनेर भनिसकेको पनि बताइन् । तर जंगवहादुरको माया नचाहने र छोराको पढाई खर्च पठाउन र विदेश जाँदा लागेको ऋण तिर्नुपर्ने बताएकी छिन् । हेर्नुस् यो निकै मार्मिक कथा पिडित सिला लामासँगको कुराकानी भिडियोमा ;
यो पनि पढ्नुस् ग्यास्ट्रिक पीडित नेपालीको संख्या धेरै छ । ग्यास्ट्रिकले तपाईं पनि हैरान हुनुहुन्छ भने यसको समाधानका लागि विभिन्न उपाय अपनाउनु भएको होला । ग्यास्ट्रिकका लागि बिरेनुनले फाइदा पुग्छ । ग्यास्ट्रिकलाई मात्र होयन बिरे नुनले धेरै खालका समस्या समाधान हुन्छ । बिरेनुनको प्रयोगले ग्यास्ट्रिक, कब्जियत, अम्लीयलगायतका समस्याबाट बच्न सकिन्छ ।
बिरे नुन धेरै खालको रोगमा घरेलु उपचारको लागि प्रयोग गर्ने गरिन्छ । आयुर्वेदमा त यसको धेरै औषधिहरुमा प्रयोग हुन्छ । सेतो नुनको सट्टा थोरै मात्रामा बिरेनुनको प्रयोग गर्न सकियो भने यसले फाइदा पुग्छ । बिरेनुन प्राकृतिक नुन हो । यो हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा डाँडापहराबाट निकालिन्छ । बिरेनुनको नियमित सेवनले बाथ, पित्त र कफलाईसमेत नियन्त्रणमा राख्ने काम गर्छ ।
बिरेनुनको प्रयोग विषेशगरि पेटसम्बन्धी रोगमा बढी मात्रामा प्रयोग हुने गरेको भएपनि यसले उच्च रक्तचापका विरामीलाई पनि बिरे नुनले निकै फाइदा पुग्छ । यो नुनमा सोडियमको मात्रा कम हुने भएकाले उच्च रक्तचापका बिरामीलाई फाइदा पुग्छ ।
पेट दुखेको, झाडापखला लागेको, पेट ढुस्सिएको आदी बेलामा यसको प्रयोग गर्ने गरिन्छ । खाना पचाउनमा बिरेनुनको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । विशेष गरि ग्यास्ट्रिक भएकाहरुले नियमित रुपमा बिरे नुनको प्रयोग गर्न आवश्यक छ ।
बिरेनुनमा सल्फर, आइरनलगायतका शरीरलाई आवश्यक खनिज तत्व प्रशस्त मात्रामा हुन्छ । जसको कारण मोटोपना, खराब कोलेस्ट्रोल, श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्याबाट बचाउने काम गर्छ ।
त्यस्तै, यसको सेवनले मधुमेह, आर्थराइटिस, प्यारालाइसिस, एनिमिया, रक्तश्राव, कपाल झर्ने, जोर्नी दुख्ने र आन्द्रासम्बन्धी समस्यालाई पनि नियन्त्रण गर्नमा भूमिका खेल्छ । यसले धातुबाट हुने असरबाट पनि बचाउँछ । त्यस्तै, छालालाई नरम, स्वस्थ, सुन्दर राख्न पनि मद्दत गर्छ ।
यसको सेवनले कुष्ठरोग, एक्जिमा वा छालासम्बन्धी रोगबाट समेत टाढा रहन सकिन्छ । तातो पानीमा मिसाएर बिरे नुनलाई पिउँदा फाइदा पुग्छ भने मनतातो पानीमा बिरेनुनको मिश्रण गरी नुहाउँदा निकै लाभदायक हुन्छ ।
दाँत, गिजा, जिब्रो, घाँटी आदिमा समस्या उत्पन्न भएमा तोरीको तेलमा बिरेनुनको मिश्रण गरी सफा गर्न सकिन्छ । यसले दाँतलाई चम्किलो बनाउनुका साथै मुखसम्बन्धी अन्य समस्याबाट पनि मुक्त हुन सहज हुन्छ ।
दिसा पातलो हुने समस्या भएमा प्याजलाई मसिनो गरी काटेर बिरेनुन र कागतीको रस एक चम्चा मिसाई प्रयोग गर्दा तत्कालै राहतको महसुस हुन्छ । पेटमा ग्यास भरिएको बेलामा मनतातो पानीमा बिरे नुन राखेर दिनमा तीनपटक खाँदा यसले फाइदा पुग्छ ।
कालो नुनको प्रयोगले भोक बढाउँछ । खाना सजिलै पच्छ । यसैले शरीरले उर्जालाई राम्रोसंग प्रयोगगर्न पाउँछ । यदि कम भोक लाग्ने समस्या छ भने कालो नुनमा सलाद, दही, मोही, कागतीपानी संगै प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसबाट शरीर पनि स्वस्थ राख्न सकिन्छ र सोडियमको मात्रा पनि बढ्दैन ।